Addunyaa kanarraa Lakkoofsaan saba baay'ee ta'ee osoo jiruu wal qixxoofna jedhee kan kadhatu saba Oromoo qofa. Piroofeesar Maraaraa Guddinaatu jedhe. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAddunyaa kanarraa Lakkoofsaan saba baay’ee ta’ee osoo jiruu wal qixxoofna jedhee kan kadhatu saba Oromoo qofa. Piroofeesar Maraaraa Guddinaatu jedhe.
Addunyaa kanarraa Lakkoofsaan saba baay’ee ta’ee osoo jiruu wal qixxoofna jedhee kan kadhatu saba Oromoo qofa.
Piroofeesar Maraaraa Guddinaatu jedhe.
Qeerroof Qarreen Magaalaa Dirre dawaa Hiriira mormii gaggeessaa jiru.taaten Oromoorratti Aggaamamee Magaalaa Dirre Dawaa keessatti ta’aa jiru balaaleffachuuf
“ሰብረውንም ከሆነ ነገ ይታያል” አለ ታማኝ በየነ።